Qaab dhismeedka biraha ayaa waqtigiisii ​​ruvets
Waqtiga dhejinta: Oct-20-2021
1960-yadii iyo 1970-yadii, ma jirin boolal aad u xoog badan, tiknoolajiyadda alxankana sidii hore ma ahayn. Sidaa darteed, dhismayaal badan oo bir ah ayaa ku xirnaa rivets, oo mararka qaarkood la arki karo marka la daawanayo filimada duugga ah. Waxay ku dhowdahay qadiimiga. Aluminium ama biraha bir -jiidka ayaa la adeegsadaa ...Akhri wax dheeraad ah »
Ahama (countersunk / madaxa flat) nuts rivet; Madaxa Countersunk / madaxa fidsan ciddiyaha jiid; Hexagon lows / bolt) - waa maxay lambarka heerka qaranka?
Madaxa Countersunk hexagon god: GB70.3 DIN7991 Madaxa furan ee ciddiyaha jiid jiid: GB12618 Hexagon low: GB6170 DIN934 Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay farqiga u dhexeeya rivets -ka dhismaha iyo rivets -ka caadiga ah?
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya iyaga ayaa ah marka lagu daro xoog sare, astaamaha caadiga ah ee rivets -ka dhismaha ayaa ah in xudunta ciddiyaha lagu xiro jirka rivet ka dib markii la ruxay. Dad badan ayaa u maleyn kara in xudunta rivet ee rivets -ka caadiga ah sidoo kale lagu hayo jirka rivet ka dib markii la ruxay, laakiin ...Akhri wax dheeraad ah »
Codsiga rivets indhoolayaasha dhismaha
Waqtiga dhejinta: Oct-13-2021
Rivets pop -ka dhismaha waxaa inta badan loo adeegsadaa khaanadaha, beeraha iyo kaymaha, qalabka guryaha, gawaarida tareenka, weelasha baabuurka qaboojiyaha, qalabka kululaynta iyo hawo -qaadka, saqafyada birta fudud iyo darbiyada daahyada, baabuurta iyo qaybaha shirka, dhisidda maraakiibta, armaajooyinka dhismaha iyo ...Akhri wax dheeraad ah »
Rivets -kii ugu horreeyay waxay ahaayeen musmaarro yaryar oo laga sameeyay alwaax ama lafo. Burburinta biraha ee ugu horreysa ayaa laga yaabaa inay tahay awowgii rivets ee aan naqaanno maanta. Shaki kuma jiro inay yihiin hababka ugu da'da weyn ee la yaqaan ee isku xirka birta, laga soo bilaabo adeegsiga asalka ah ee birta la isku hallayn karo. Tusaale ahaan, da'da naxaasta, t ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay farqiga u dhexeeya lowska river countersunk iyo lowska rivet flat?
Flange lowska rivet Countersunk waa xaglo. Godad ka hortag ah ayaa u baahan in la qodo inta la rakibayo. Waxay u qaybsan tahay lowska miisaanka weyn iyo lowska river ee ka -hortagga. Lowska river counter Counterunk lowska rivet madaxa Flange ee lowska rivet madaxa flat waa wareegsan.Akhri wax dheeraad ah »
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka madaxa furan ee rivets indhoolayaasha
Waqtiga dhejinta: Sep-22-2021
Faa'iidooyinka: waxay ku habboon tahay isku xirka u dhexeeya agabyada kala duwan iyo munaasabadda iyada oo aan la kala qaadin. Waxaa lagu qali karaa hal dhinac oo ka mid ah qalabka shaqada. Qalabku waa mid sahlan oo si sahlan loo hawlgeli karo iyo hufnaanta rakibidda ayaa sarreeya. ● Qasaarooyinka: cidhiidhiga lama hagaajin karo ...Akhri wax dheeraad ah »
Marxaladaha codsiyada ee madaxa wareegsan ee indho la '
Nooca furan ee madaxa wareegsan indho -la 'waa sahlan tahay in la rakibo oo laga shaqeeyo hal dhinac iyada oo aan la helin qaybo kale oo isku -dhafan. Badeecadu waxay leedahay faa'iidooyinka qaab -dhismeed fudud, qiime jaban, xoog isku -dhejin dhexdhexaad ah iyo xiriir deggan oo la isku halleyn karo. Waxaa si weyn loogu dabaqi karaa xiritaanka u dhexeeya taarikada ma kala duwan ...Akhri wax dheeraad ah »
Sheekooyin taariikhi ah oo rivets godan
Rivets -ka bannaan waxaa inta badan loo alifaa soo -saarka ama dayactirka qalabka suunka. Ma aha mid aad u cad marka la alifay rivets godan. Laakiin suunka waxaa la ikhtiraacay qarnigii 9aad ama 10aad ee miilaadiga riveted suunkii wuxuu ka xoreeyay addoommadii hawsha culus sida fardaha fardaha lagu qodbay.Akhri wax dheeraad ah »
Faa'iidooyinka shirarka ee Dhismaha Hollow ayaa rivets
Rivets Structural Hollow waxaa loo adeegsadaa isku xirka dhismaha hal dhinac ah oo deg deg ah, kaas oo buuxin kara shuruudaha xiirashada sare iyo iska-caabbinta giijiska. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee la adeegsado waxaa ka mid ah: 1. Dhisme dhinac keliya ah 2. Kala -sooc ballaaran oo ballaaran 3. Rakibaadda deg -degga ah 4. Xoog weyn oo wax lagu xiro 5. Seis wanaagsan ...Akhri wax dheeraad ah »
Maxaa loo adeegsadaa rivets godan? Waa maxay astaamaheeda?
Codsiga iyo astaamaha rivets godan. Xidhiidhka rivet godan wuxuu la mid yahay isku-xidhka rivet-ka ee godan, kaas oo iska leh isku xidh-xidhaha qaab-dhismeedka aan xambaarsanayn. Daloolka godan ee rivetku wuxuu dhex mari karaa dhuumaha waxaana si weyn loogu isticmaalaa isku xirka ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay rivet jiido xudunta furan?
Rivet jiidaya furaha furaha ah waa nooc ka mid ah xoog-sare sare oo isku xira xiraha, kaas oo leh astaamaha xoogga sare, dhammaystirka sare, dhalaalaya oo dillaacaya dusha sare, dhibco aan lahayn miridh, dusha sare ee xasiloon oo lagu kalsoonaan karo, dusha fidsan ee fidsan iyo wixii la mid ah. Dhamaadka Furan ee Furaha Indhaha IndhoolahaAkhri wax dheeraad ah »
123456 Xiga> >> Bogga 1 /11